Ị bụ onye adventurous onye ma ọ bụ nwere ike ịbụ a ọrụ n'aka ọrụ onye kwesịrị ịkwaga mere mgbe ọtụtụ mara ma ọ bụ amaghị ebe. Dị ka na ị nwetara ihe gam akporo ngwaọrụ, ị mkpa ụfọdụ map & navigation ngwa awụnyere na gị hụrụ n'anya Android ekwentị maka agbazinye-echegbu gị na.
Ma n'etiti ndị niile ngwa ọdịnala na internet i nwere ike enweghị echiche ihe ndị kasị mma map na navigation ngwa ezie na ị chọrọ ya dị nnọọ njọ. Luckily i abịa nri ebe. Iji mee ka gị na-echegbu akwụsị, ị dị nnọọ mkpa ịnọgide na-ndidi & lelee anyị rundown nke n'elu map ngwa ọdịnala na-ebe ọ bụla ị chọrọ ịga.
Anyị ga-ekwu banyere ụfọdụ map ngwa n'ebe a, ma dị ka anyị na-ekwu okwu banyere android, anyị ga-atụle 'Google Maps' dị ka onyeisi nke ihe nile map ngwa. Ya mere, anyị ga-amalite na Google Maps.
Part 1. Gịnị Google Maps-emere gị
Part 2. Olee otú Mee Google Maps E Nwere anọghị n'ịntanetị
Part 3. Top 5 Alternatives Maps ebudatara maka Android
Part 4. Download / wụnye / uninstall / Share / Export Google Maps na Alternative égwu na Otu Ebe
Obi abụọ adịghị n'ihi ọtụtụ ihe, ọ bụ ihe kasị mma map ngwa n'ihi na Android. N'ezie aha ya bụ 'Maps' ma Otú ọ dị, ọ bụ na-ewu ewu site na aha - Google Maps. Ị ga-ahụ ya wuru na-na ọtụtụ Android ngwaọrụ. Ikekwe ọ bụ ndị kasị ewu ewu & ọtụtụ ebe ada map ngwa n'ụwa a. Ọbụna Apple-atụ aro ya dị ka onye ọzọ ka ya nkewa usoro. Ọ nwere ihe nkezi Google Play Store fim nke 4.3 kpakpando, nke a ga-ekwe omume 5 si 2.611.941 ndị nlebanye anya. E nwere mgbe mmelite si Google na ya, n'ihi ya, ọ na-emeziwanye ụbọchị & Google na-agbakwunye ọzọ ọhụrụ atụmatụ ọ bụla mmelite. E nwere ọtụtụ atụmatụ na ngwa a. Ka na-anya ụfọdụ n'ime ha.
Pụrụ ịdabere na & ezi map nke 220 mba & mpaghara.
Dị iche iche ụdịdị nke navigation (eg biking, ịga ije, ọha iga, ịnya ụgbọ ala).
Ekwe ka Voice-eduzi GPS navigation maka-eje ije, biking, na-akwọ ụgbọala.
Transit ntụziaka na map n'ihi na ihe karịrị 15,000 obodo na obodo nta.
Live okporo ụzọ ọnọdụ, akpaka rerouting na merenụ akụkọ aka ịchọta ụzọ nke kacha mma.
Nye gị ihe ọmụma zuru ezu ihe karịrị 100,000,000 ebe.
Enye Street View na ime ụlọ imagery maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ngosi ihe mgbe ochie, na ndị ọzọ.
Na-enye ohere offline nbudata nke map maka iji na-enweghị njikọ data.
Otutu echiche ụdịdị.
*** Ụfọdụ atụmatụ bụ nanị dị na mmachi mba.
Download Google Maps (Maps) maka Android si Google Play >> (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=en)
Google Maps-eme ka ọ kemfe n'ihi na ị na-enye gị navigation ka ebe ọ bụla ị chọrọ ịga. Otú ọ dị, na-emekarị, i kwesịrị atụgharị na netwọk na gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl n'ihu na-eji ya. Nke a na-eme ka ọ kemmekpa mgbe ị na-enweghị WiFi ma ọ bụ netwọk dị, ma ọ bụ mgbe internet-agba bụ nnọọ ngwa ngwa.
Na nke a, i nwere ike chọrọ ibudata Google Maps na-eji ya na-anọghị n'ịntanetị. Na akụkụ a, m na-tumadi-egosi gị otú ime ya.
E nwere ụzọ abụọ iji ihe nke ebe map offline: Way 1. Gaa NchNhr> Mee dị offline. N'ógbè selector ga-egosi na gị na ihuenyo. Way 2. Gaa Maps> My Ebe>-anọghị n'ịntanetị> New offline map. A dialog ga-egosi na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ihuenyo ebe i nwere ike pịnye a mpaghara ma ọ bụ obodo aha-atụ Paris - Ka ịhọrọ site na map.
Ka ibudata otu ebe, ị nwere ike tuo na mbugharị na map n'ime ebe selector na mgbe ahụ ịzọpụta gị nhọrọ.
Cheta na: E a 14 ụbọchị oge ịgba maka ihe ndị ebudatara offline map.
E wezụga Google Maps, E nwere ọtụtụ ọzọ map ngwa ọdịnala n'ihi gị. Ebe a, m depụta ndị kacha mma 5 map ngwa ọdịnala nke na-ọma mara ha atụmatụ. Ị nwere ike ịchọta otu nnyocha nke ndị ngwa ọdịnala si na tebụl n'okpuru.
Achọrọ OS version
1. Waze-elekọta mmadụ GPS map & traffics 26 MB Free Android 2.2 na elu 4.6 / 5
2. Map lekọtara: GPS Navigation 9,7 MB Free Android 2.3 na elu 4.4 / 5
3. OsmAnd Maps & Navigation 25 MB Free / 8.10 $ Android 2.1 na elu 4.5 / 5
4. BackCountry akwọ ụgbọ mmiri TOPO GPS Dịgasị na ngwaọrụ Free / 11,99 Dịgasị na ngwaọrụ 4.5 / 5
5. GPS Navigation & Maps site Sygic 47 MB Free Android 2.1 na elu 4.2 / 5
Ọ bụ ihe na ngwa na-ejikọ mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet na GPS igodo. Na okwu, ọ bụ nnọọ ihe dị egwu Android map ngwa n'ihi na nbudata. Na nke a ngwa, ị ga-esi ihe ọmụma banyere ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ndị uwe ojii, ụlọ ahịa na a otutu ihe. Ọ na-egosikwa okporo ụzọ jams, ụgbọ njem na-akwụsị, na-adọba ụgbọala na ndị ọzọ na ihe ọmụma bara uru. Ị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla onye ọrụ ọnọdụ na-achọ n'ime ha avatar. I nwekwara ike na-akpọ Facebook site na nke a ngwa. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa obodo dabeere okporo ụzọ na navigation ngwa.
Real-oge okporo ụzọ & ụzọ ọmụma.
Gosi alerts, gụnyere mbibi, ihe mberede, okporo ụzọ closures, uwe ojii afia, na ndị ọzọ.
Tụgharịa-site-n'aka navigation na olu ndu.
Live map, anọgide dezie na emelitere site Waze obodo map editọ.
Akpaghị aka reroute mgbe ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi na n'okporo ụzọ.
Mụta gị ugboro ugboro ebe, họọrọ ụzọ gasị nakwa dị ka n'ụzọ awa.
Chọta ndị dị ọnụ ala mmanụ ụgbọala na gị ụzọ.
Tinye kọntaktị dị ka ndị enyi gị na Waze.
Lee enyi 'Ndien mgbe ụgbọala otu ebe.
Send akpaka mmelite ọnọdụ gị & Ndien.
Otu mgbata jikọọ Facebook & Kalinda ihe.
N'izo usoro ịrị n'ohu nọ n'ógbè gị ka ị na-eme ụzọ Ama.
Download Waze Social GPS Maps & Traffic si Google Play Store >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=en
2. Map lekọtara: GPS Navigation
O nwere ike iyi ka ndị ọzọ Android map ngwa ọdịnala na internet ma ụfọdụ atụmatụ mere ka ọ pụrụ iche & peculiar site n'aka ndị ọzọ. Ọ na-enye ihe audible ịdọ aka ná ntị mgbe onye ọrụ na-eru nso ka ọ bụla ọsọ ese foto. Na o nwere a 3D GPS navigation mode nakwa dị ka nkịtị 2D mode bụ n'ebe ahụ. Day / n'abalị ụdịdị ịgbanwee agba atụmatụ maka ụbọchị ma ọ bụ n'abalị oge ịnya ụgbọ ala. Atụmatụ ndị a mee ka ọ a pụrụ iche ngwa-enweghị obi abụọ.
Na-enye gị audible ịdọ aka ná ntị mgbe na-eru nso ọsọ ese foto.
Nchekwa onwe n'usoro n'usoro Map
Kwado ịzọpụta chọrọ ebe ke Android ngwaọrụ ebe nchekwa.
N'ụlọ n'ụlọ ụzọ atụmatụ.
Nye gị olu igodo n'asụsụ dị iche iche.
Download Map lekọtara: GPS Navigation si Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapfactor.navigator&hl=en
OsmAnd na-ezo aka OSM akpaghị aka Navigation Directions. Ọ bụ ihe ọzọ n'aka-site-n'aka GPS navigation ngwa. Ọ na-enye gị akpaka re-nsochi usoro ọ bụrụ na ị adapụ ụzọ. Isi ọrụ nwere ike na-agba ọsọ na-enweghị internet, otú ị echegbula banyere adịghị eji map oge niile. Ọ na-nwere olu nduzi & pụrụ igosipụta satellite echiche nke map. Atụmatụ ndị a emewo ka a na ngwa a masterpiece.
Akpaghị aka ụbọchị / n'abalị echiche ịmafe.
Nhọrọ ịgba ọsọ ngosi, na ncheta.
Nhọrọ ọsọ-dabere map zooming.
Ekekọrịta ọnọdụ gị mere na enyi gị nwere ike ịhụ gị.
Azọpụta gị kasị mkpa ebe ndị dị ka ọkacha mmasị.
Awade olu nduzi.
Mụta ihe banyere OsmAnd Maps & Navigation si Google Play >>
4. BackCountry akwọ ụgbọ mmiri TOPO GPS
Ọ nwere ikpe mbipute nakwa dị ka a zuru version. The ịgba nke ikpe mbipute bụ ụbọchị 21. Ọ pụrụ ịbụ nnọọ kemfe n'èzí njem ndị mmadụ merela. Ọ nwere mmiri map. Ọ bụ nnọọ uru ha na-n'anya gaa hiking. Ọ na-ike ga-eji na-anọghị n'ịntanetị.
Nwere Marine map.
Nga ebudatara topographic map.
GPS ụzọ ebe.
Awade Iji GPS waypoints si GPX ma ọ bụ KML faịlụ.
Tinye nke na-achịkọta iji lonjituudu / ohere.
Mụta ihe banyere BackCountry akwọ ụgbọ mmiri TOPO GPS si Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crittermap.backcountrynavigator.license
5. GPS Navigation & Maps site Sygic
Otu nke kasị mma offline map ngwa ọdịnala na ụwa a na & doro anya na ọ ga-eji online kwa. A na ngwa bụ a ndekọ njide, ọ bụ ụwa kasị ebudatara offline ụzọ GPS navigation ngwa na Google Play. Ọ nwere nnukwu collection nke map. N'ime 160+ downloadable map ike ga-eji offlines. Ọ na-enye atụ nke GPS navigation na ike uzo nduzi. Mgbe ọ bụla ị na-enweta na map, ọ ga-egosi nkọwa na ọnọdụ.
3D obodo na map, anya jụụ.
Voice eduzi n'aka-site-n'aka igodo usoro.
Kwuru Street aha na-elekwasị anya n'okporo ụzọ.
Atọ Alternative ụzọ gasị ịhọrọ site na.
Nye ịdọ aka ná ntị na-egbusi turnings, ọsọ ese foto, ụzọ-blocks.
Download map maka offline n'èzí igodo.
Download GPS Navigation & Maps site Sygic si Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura&hl=en
E nwere tọn & tọn ngwa ke Google Play Store. Ọ bụ nnọọ ike họrọ naanị 6 site na ha. Ma anyị na-agbalị kasị mma anyị iji nye gị a ndepụta nke 6 navigation ngwa ọdịnala nke anyị na-atụ ga-enye aka n'ihi na ị. Ugbu a, ọ bụ oge gị na-ego ndị a ngwa ọdịnala si & na-aga ebe ọ bụla ị chọrọ. N'ihi na ugbu a ị nwere ụfọdụ ngwaọrụ nke ga-eduzi gị ụzọ niile site na.
Part4.Download/install/uninstall/Share/Export Google Maps na Alternative égwu na Otu Ebe
Na akụkụ n'elu, m na-akọrọ top 6 Android map ibudata. Ugbu a, ị pụrụ ibudata na ịwụnye ha na gị na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ma ọ bụ ịkọrọ ha na ndị enyi gị site na Facebook na Twitter. Iji mee ka ya, m nwere ike ikwu ihe niile na-na-otu Android njikwa maka gị. Ọ bụ Wondershare MobileGo for Android (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ọ na-enye gị mfe ohere Google Play ụlọ ahịa na-ozugbo download gị chọrọ map gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Mgbe ahụ, ị nwere ike ijikwa ha site na kọmputa effortlessly.
Nzọụkwụ 1. Download Windows ma ọ bụ Mac version nke Wondershare MobileGo for Android na kọmputa. Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa na eriri USB. Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, ị pụrụ ọbụna jikọọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba site WiFi. Nzọụkwụ 3. Mgbe ala n'akụkụ aka ekpe, pịa Google Play App. Wet ke gị chọrọ map na search igbe. Mgbe navigating map nbudata page, Pịa Wụnye iji wụnye ya na gị na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Nzọụkwụ 4. Na ekpe sidebar nke MobileGo for Android, pịa égwu. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịmalite ịkọrọ, mbupụ, uninstall, na-ele map ngwa ọdịnala na ndị ọzọ.
Olee otú undelete Photos si gam akporo mkpanaaka na & n'Ụrọ
> Resource> Android> Top 6 Maps ngwa ọdịnala n'ihi Android ka Were ebe ọ bụla ị Chọrọ